Torolàlana ho an'ny fampiasana fakan-tsary amin'ny vatana | Vahaolana OMG
Ity fikarohana ity dia mikendry ny hamantatra ireo torolàlana ho an'ny fampiasana fakan-tsary mifono vatan-dehilahy amin'ny masoivoho fampiharana ny lalàna. Natao hanohanana ireo masoivoho fampiharana ny lalàna amin'ny fananganana fomba fiasa sy ny politika mifehy ny fampiasana ireo fakan-tsary mifono vatana. Ity tahirin-kevitra momba ny torolàlana ity dia mifandraika amin'ny fampiasana tsotra fakan-tsary ampiasain'olon-tsotra izay ampiasaina noho ny besinimaro ary miaraka amin'ny fahatakarana fa nampahafantarina ny besinimaro ny fampiasan'izy ireo azy.
Na eo aza ny fepetra takian'ny lalàna momba ny fiarovana ny mombamomba ny tena manokana, ny fampiasana fakantsary vita amin'ny vatana dia afaka mampifandray ireo fanerena hafa izay tokony ho fantatry ny masoivoho ny lalàna.
Ohatra, ny fakantsary manana vatana dia afaka mirakitra sary, feo ary fifanakalozan-dresaka miaraka amina hadisoana avo lenta. Noho izany, mety misy fiahiahiana fanampiny raha ny fampiasana ny fakan-tsary mifono vatan'olona amin'ny resaka vanona omena dia manantona ny fiheveran'ny besinimaro ny fiainana samirery na manelingelina ny fifandraisana manokana, ao anatin'ireo toerana azon'ny besinimaro. Ny masoivoho fampiharana ny lalàna koa dia tokony hitandrina bebe kokoa amin'ny fiantraikany ara-dalàna isaky ny misy sary sy ny feo voarakitra ao amin'ny habaka tsy miankina, toy ny ao anaty tranon'ny olona na fiara.
Body camorn cameras and privacy:
Body-Worn Camera dia mirakitra fitaovana namboarina mba hanaovana akanjo fanamiana lalàna, izay mety ahitana satroka na solomaso. Izy ireo dia manome an-tsoratra firaketana an-tsary ho zava-nitranga avy amin'ny fomba fijerin'ny manampahefana rehefa manao ny andraikiny isan'andro ny manamboninahitra. Ny sary nomerika avo lenta dia mamela ny fahitana mazava ny olona tsirairay ary mifanaraka amin'ny rindrambaiko rindrambaiko an-tsary, toy ny fanekena ny tarehy. Ny mikrofona dia mahay mandray an-tsoratra tsy ireo feo mifandraika amin'ny toe-javatra voarindra ihany fa koa feo mihoa-pampana izay mety ahitana ny resaka ataon'ireo mpijery.
Ny teknolojia Camera-Worn Body dia maneho ny fitomboan'ny fahalalàna hatrany am-boalohany tamin'ny fakantsary raikitra rehefa natsangana ankolaka ny rafitra CCTV ary afaka mirakitra sary fotsiny fa tsy mandeha. Amin'izany fotoana izany, birao fanalàna tsy miankina amin'ny fanjakana kanadianina no namoaka ny torolàlana fandinihana horonantsary ho an'ny sehatra ho an'ny daholobe, izay manomboka amin'ny faran'ity taratasy ity. Na dia tsy mitovitovy aza ny fitsipika fototra momba ny tsiambaratelo manodidina ny fandinihana horonantsary, dia mifanena bebe kokoa ny tontolo iainana ankehitriny. Rehefa mandroso ny teknolojia fanaraha-maso, voaangona ny fampahalalana momba ny tena manokana (na horonan-tsary sy audio) miaraka amina toe-javatra maro samihafa (na static na finday) miaraka amin'ny fampahalalana mifandray amin'ny vaovao tsy miankina (ohatra ny fanekena ny tarehy, ny metadata). Mazava ho azy fa ny LEA dia te-hiasa amin'ny fampiasana teknolojia vaovao hanampiana azy ireo amin'ny fanatanterahana ny andraikiny. Mandritra izany fotoana izany, ny teknolojia BWC dia manisy otrikarena mafy ny zon'ny tsirairay amin'ny fiainana manokana. Mino izahay fa ny famahana ny dinidinika momba ny tsiambaratelo manomboka am-piandohana dia afaka manome fifandanjana mifanentana eo anelanelan'ny filàn'ny fampiharana ny lalàna sy ny zon'ny fiainana manokana.
Ny fakantsary Worn Ny vatantsika dia ho vahaolana mahomby amin'ny fitakiana efa fantatra? Ny LEA dia tokony hihaino tsara ny fameperana ny teknolojia. Ny mampiavaka ny hetsika dia mety hitranga amin'ny fakantsary, ny fakana feo dia mety tsy feno noho ny rakitsoratra misy fiafarany, na ny fahadisoan'ny olona dia mety hampandefitra ny mahasoa ny firaketana ary mampihena ny mahomby aminy. Raha toa ka ampiasaina ho porofon'ny fanaovan-javatra ny firaketana an-tsoratra, ny LEA dia tokony hihevitra ny fepetra takian'ny Courts momba ny fanekena ny firaketana an-tsoratra ary koa ny fepetra fanangonana sy fitehirizana ny toro-hevitra omena mba hahazoana antoka fa mahafa-po ireo zavatra ilaina ireo.
Raha tsy misy fisalasalana, ny fampiasana ny BWC dia miteraka fahaverezam-piainana satria ny firaketana ny resaka sy ny zavatra ataon'ny olona dia tsy miankina amin'ny tsiambaratelo. Noho izany, ny fanelingelenana momba ny fiainana manokana dia tsy azo ahena kely amin'ny haavo mety ary mifanohitra amin'ny tombontsoa lehibe sy azo iatrehana. Amin'ny alàlan'ny teknolojia vaovao, mety ho sarotra ny maminavina ny fiantraikan'ny vokatra mahomby sy ratsy amin'ny fametrahana isan'andro sy ny fiaraha-monina omena. Ny fanaovana tetik'asa mpanamory dia voalaza fa fomba tena azo tsapain-tanana amin'ny fijerena ny fiantraikan'ny tsiambaratelo momba ny fakan-tsary amin'ny vatam-paty momba ny tombontsoany, alohan'ny hanapahany na handamina azy ireo ny halehibeny ary amin'ny toe-javatra.
Ny famotopotorana farany dia ny fahazoana fepetra tsy dia misy dikany loatra raha ny tanjona ihany. Na dia mety hisy tranga raharaham-barotra ho an'ny programa momba ny fakan-tsary amin'ny vatana aza, ny fepetra tsy mahazatra dia tokony hoheverina hahalala raha afaka mameno tsara ireo fepetra takian'ny fandidiana izy ireo amin'ny resaka fifandonana tsy mahomby amin'ny fiainana manokana. Ny fepetra kely farafahakeliny momba ny valopy manokana dia ny safidy.
Fanombanana ny fiatraikany amin'ny tsiambaratelo:
Ho fampisehoana tena tsara indrindra, dia tokony ho vita mialoha ny fampiasa amin'ny fakantsary Body Worn mba hanampiana ny mety hisian'izany loza mety hitranga amin'ny fandaharam-potoana an'ny Body-Worn Camera izany. Ny PIA dia mety ho sarobidy amin'ny fanampiana ny LEA manala ireo risika ireo na mampihena azy ireo amin'ny sehatra mety. Ohatra, mety misy fiheverana fanampiny, toy ny firafitra sy ny fahatsapana ara-kolontsaina izay tokony hojerena amin'ny fanapahana hevitra raha hampiasa BWC amin'ny tranga misy. Ny PIA dia tokony ahitana drafitra iray momba ny fizahana hevitra sy mahasarika ny fiaraha-monina izay hapetraka BWC.
Ny masoivoho fampiharana ny lalàna dia afaka mitady ihany koa ny fanampian'ny manam-pahaizana manokana momba ny tsiambaratelo alohan'ny fampiharana ny programa Kamera-Worn. Ny manam-pahaizana manokana momba ny tsiambaratelo dia afaka mandinika ny fangatahana fakantsary momba ny Body-Work amin'ny vondron'olona mba hahazoana antoka fa natao ny fanangonana sy fampiasa momba ny mombamomba ny tena manokana mba hanohanana ny adidy eo ambanin'ny lalàna samirery.
Ny fiainana manokan'ny mpiasa dia tokony hojerena ihany koa. Ny fakan-tsary amin'ny body-Worn dia afaka maka ny angon'ireo manampahefana amin'ny fampiharana ny lalàna izay arovana eo ambanin'ny lalàna momba ny tsiambaratelo amin'ny sehatra manokana. Ny faritra mety hitranga dia ny fampiasana ny firaketana fakan-tsary an'ny Body-Worn mba hanohanana ny fanombanana ny asa ataon'ny mpiasa. Ny mpiasa dia mety hanana zon'ny fiainana manokana amin'ny alàlan'ny lalàna hafa sy fifanarahana iombonana izay mety hisy fiantraikany amin'ny programa BWC.
Raha ny fampiasana ny firaketana dia raisina ho an'izay fiasa izay manampy amin'ny tanjon'ny fandaharam-pandraisana Votoaty Body-Worn, ohatra, ny fanombanana ny fampisehoana, ny fanofanana mpiandraikitra, na ny fikarohana, ireo tanjona faharoa dia milajerena mba hahazoana antoka fa mifanaraka amin'ny lalàna mety. ary mila miasa tsara ny mpiasa. Ary koa, ny fitsipi-pitondran-tena dia tokony hapetraka amin'ny sisintany amin'ny fiantraikany amin'ny tsiambaratelo, toy ny famonoana endrika sy izay famantarana misy azy ary tsy anisany firaketana misy votoaty saro-pady.
Ny fototry ny famoahana ny BWC, ao anatin'izany ny filàna fandidiana ary ny tanjon'ny programa.
Ireo manampahefana mpahay lalàna momba ny fanangonana ny mombamomba ny tena manokana eo ambanin'ny fandaharana.
Andraikitra sy andraikitry ny mpiasa momba ny fakan-tsary momba ny vatana sy ny firaketany.
Fitsipi-pifehezana ho an'ny firaketana an-tsoratra tsy miovaova sy fanodinana ireo BWCs raha ilaina.
Fanomezana torolàlana sy fiofanana nomanina ho an'ny mpiasa mba hahazoana antoka fa fantatry ny manampahefana ny fampidirana manokana ny fakan-tsary amin'ny body-Worn ary ho fantatra ny andraikitr'izy ireo eo ambanin'ireny fitsipika sy fomba fiasa ireny.
Mpiambina momba ny fiainana manokana ho an'ny mpiasa izay ny fampahalalana manokana azy dia nalain'ny Camera-Worn Camera.
Ny fanomezana ny adidy amin'ny fiantohana fa ny politika sy ny fomba fakan-tsary momba ny fakan-tsary dia arahana, ary miaraka amin'ny tompon'andraikitra manontolo.
Ny vidin'ny tsy manaja ireo politika sy ny fomba.
Zo an'ny isam-batan'olona. Ny olona tsirairay dia tokony hampandrenesina fa manan-jo hitaraina amin'ny sampana misahana ny tsiambaratelo momba ny tsiambaratelo momba ny fitantanana ny firaketan-dalàna momba ny fitantanana firaketana mihazona ny mombamomba azy izy ireo hanapahana hevitra raha misy ny fandikana ny lalàna momba ny tsiambaratelo.
Ny adidy na inona na inona fifanarahana eo amin'ny Agence d'Antsiranana sy ny mpanome tolotra an'ny antoko fahatelo dia mampiseho fa misy lava ny firaketana an-tsoratra eo amin'ny fifehezana ny Law Enforcement Agencies ary iharan'ny lalàna momba ny fiainana manokana.
Fandinihana ho an'ny fanaraha-maso ara-dalàna amin'ny programa an'ny Camera-Worn Camera mba hamahana ny fanarahana ireo fomba fiasa, politika ary lalàna momba ny fiainana manokana. Ny fizahana am-bava dia tokony hahitana raha toa ka mijanona ho voamarina ny fijerena fakantsary Body-Worn raha jerena ireo tanjona voalaza ao amin'ny programa.
Eo amin'ny sehatra misy ny politika PIA, fandaharana ho an'ny PIA isaky ny misy fiovana lehibe eo amin'ny fandaharana.
Ny anarana sy ny fampahalalana mifandray amin'ny olona iray afaka mamaly ny fanontaniana avy amin'ny vahoaka.
Ireo toe-javatra izay azo jerena ny firaketana an-tsoratra. Ny fiambenana dia tokony hitranga amin'ny fototra mila fantatra. Raha tsy misy fisalasalana ny hetsika tsy fanarahan-dalàna nitranga ary tsy nisy fiampangana ny fitondran-tena ratsy, tsy tokony hojerena ny firaketana an-tsoratra.
Ireo tanjona azo anaovana firaketana an-tsoratra ary misy toe-javatra voafetra na fepetra, ohatra, ny fanesorana ny votoaty saro-pady amin'ny firaketana an-tsoratra ampiasaina amin'ny tanjona fampiofanana.
Ny fetra voafaritra momba ny fampiasana video sy audio analytics.
Ny toe-javatra izay ahitan'ny firaketana an-tsoratra ho an'ny besinimaro raha misy, ary ny fetran'ny fiparitahana toy izany. Ohatra, ny endrika sy ny marika marika an'ny ankolafy fahatelo dia tokony hotradradradra ary misy feo mihetsika na aiza na aiza misy azy.
Ny toe-javatra izay ahitan'ny firaketana an-tsoratra ivelany ny fandaminana, toy ny, amin'ireo masoivohom-panjakana hafa amin'ny fanadihadiana marim-pototra, na iraka ara-dalàna ho anisan'ny fampandrosoana ny fitsarana.
Raha fintinina, ny fakan-tsary niakanjo tena dia mahasoa indrindra miaraka amin'ireo manelingelina azy izay, tsy ny firaketana ny fitenenana sy ny asan'ny olona ihany, fa ny fikambanan'ny olon-drehetra miaraka amin'ny hafa ao anatin'ireo karazana firaketana an-tsoratra, anisan'izany ny olona ao amin'ny fianakaviana, ny mpijery, ny namana, ny voarohirohy, sy ny tra-boina. Ny firaketana ireo olona amin'ny alàlan'ny fakan-tsary mitazona vatana dia miteraka risika lehibe amin'ny tsiambaratelo manokana, ary ny maso-maso fampiharana ny lalàna dia tsy maintsy atokana amin'ny fametrahana ny fakan-tsary amin'ny Bad-Worn amin'ny haavony sy amin'ny fomba miaro sy manaja ny besinimaro sy ny mpiasa amin'ny ankapobeny. zon'ny momba ny fiainana manokana.
Torolàlana ho an'ny fampiasana fakan-tsary amin'ny vatana no farany niova: Desambra 10th, 2019 by Admin